Nam Joo Hyuk လက်မှာဒဏ်ရာတွေတောင်ရသွားအောင် ဘယ်လိုတွေတောင်အားပေးကြမ်းခဲ့လဲ အစ်မတို့ရေ 😅 – Trend.com.mm
Nam Joo Hyuk လက်မှာဒဏ်ရာတွေတောင်ရသွားအောင် ဘယ်လိုတွေတောင်အားပေးကြမ်းခဲ့လဲ အစ်မတို့ရေ 😅
Posted on July 31, 2018 by Noel
Nam Joo Hyuk ဆို Weightlifting Fairy Kim Bok-joo ၊ The Bride of Habaek စတဲ့ဇာတ်ကားတွေရဲ့ မင်းသားချောလေးအဖြစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးသားပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမင်းသားချောလေး Nam Joo Hyuk က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အဆိုတော် Sandara Park နဲ့အတူ ဖိလစ်ပိုင်မှာ fan meeting ပွဲလေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်မှာလည်း Nam Joo Hyuk ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အပြည့်ပါပဲ။အနုပညာရှင်ကိုချစ်တာလည်းချစ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ လေးစားမှု၊အားနာသမှုတော့ရှိရမယ်မဟုတ်လား။Fan meeting ပွဲမှာ မိန်းကလေးပရိသတ်တစ်ချို့ရဲ့လုပ်ရပ်က ပွဲကိုအနည်းငယ်ရုပ်ဆိုးသွားစေသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။Nam Joo Hyuk နဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကြဖို့လုပ်နေရင်း မင်းသားခမျာ သက်တောင့်သက်သာတောင်မရှိရအောင်အတင်းကိုတိုးကပ်ပူးကပ်ပြီးရိုက်နေကြတာပါ။ဘယ်လောက်တောင်တိုးလဲဆိုရင် ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်အပြီးရော မင်းသားရဲ့လက်မောင်းမှာ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့လက်သည်းကုတ်ခြစ်ရာအစင်းရာတွေတောင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
— M ♡ (@yatta_marie) July 30, 2018
အဲ့ဒီပုံတွေကိုမြင်ပြီးတော့ ဖိလစ်ပိုင်က ပရိသတ်တွေကရော၊ကိုရီးယားပရိသတ်တွေက အတော်လေးစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်နဲ့အနီးကပ်တွေ့ရလို့ ပျော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအပြစ်မဆိုရက်စရာပါ။သူတို့လည်းမင်းသားကိုမြင်တော့စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ အတင်းဖက်မိကြတယ်ထင်ပါရဲ့ ။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတစ်ချို့က မနည်းကိုဖယ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီပွဲမှာ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ရဲတင်းလွန်းတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့် Nam Joo Hyuk ရဲ့ ပုံစံက သိပ်ပြီးသက်တော့င်သက်သာပေါ့ပေါ့ပါးပါးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ပြည်သူချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ပီသစွာပဲ သူအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာပါ။မင်းသားရဲ့လက်မောင်းက အစင်းရာကုတ်ခြစ်ရာတွေ၊အတင်းဝိုင်းဖက်ခံရတာတွေကိုမြင်ပြီး ပရိသတ်တွေကအနုပညာရှင်တွေအတွက် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့လုံခြုံရေးတွေရှိသင့်တယ်၊သူတို့အပေါ်ပိုပြီးလေးစားမှုရှိသင့်တယ်ဆိုပြီးတွစ်စ်တာတွေ၊အင်စတာဂရမ်တွေကနေပြောထားကြပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်ပရိသတ်တစ်ချို့က မင်းသား Nam Joo Hyuk ရဲ့ ချစ်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Lee Sung Kyung နဲ့ သဘောတူပုံပါ။သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုပြန်ပြီးဖွင့်ပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး FanMeeting ပွဲမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေက ထိုပရိသတ်တွေကို အပြစ်တင်ထားပါတယ်။”ဒီလိုမျိုးအရင်ရည်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတာ၊သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့ခံစားချက်က ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းနိုင်မှာလဲ?သူ့အပေါ်လေးစားမှုမရှိကြဘူး”ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။”အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် Weightlifting Fairy Kim Bok-joo ဇာတ်ကားလေးကိုပြန်ကြည့်ရတာကမင်းသားအတွက် အရမ်းစိတ်ညစ်သွားမယ်တော့မထင်ရပါဘူး။သူတို့က ချစ်သူတွေအဖြစ်ကနေပြတ်စဲခဲ့ပေမဲ့ အရင်ကတည်းက သံယောဇဉ်ကြီးခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပဲလေ။Fan Meeting က နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးမှုကြောင့်သာ သူ့အနေနဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်မှာ”လို့တစ်ချို့ပရိသတ်တွေကတော့ ပြန်ပြီးဖြေရှင်းထားကြပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အားပေးကြမ်းချက်ကလည်း ပရိသတ်တွေဝေဖန်ချင်လည်းဝေဖန်ချင်စရာပါ။ဒါပေမဲ့ သူတို့အိုင်ဒေါလ်စိတ်ရှုပ်သွားခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေကပြန်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ပုံလေးတွေကြည့်လို့ရအောင် ပြန်ပြီးမျှဝေလိုက်တယ်နော်။
Help us extend our sincere apologies to Nam Joo Hyuk and Dara through retweeting this tweet. Thank you! 🙏🏻@nam6310@krungy21 #NamJooHyuk#남주혁 #南柱赫 #skawngur #NamJooHyukXPenshoppe #PenshoppeFancon #PenshoppePresentsNamJooHyuk #namjoohyukph pic.twitter.com/ULMvxNGXV1
— NAM JOO HYUK PH 🇵🇭 (@NJHPhilippines) July 30, 2018
Nam Joo Hyuk ဆို Weightlifting Fairy Kim Bok-joo ၊ The Bride of Habaek စတဲ့ဇာတျကားတှရေဲ့ မငျးသားခြောလေးအဖွဈပရိသတျတှအေားလုံးသိပွီးသားပါ။တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမငျးသားခြောလေး Nam Joo Hyuk က ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက အဆိုတျော Sandara Park နဲ့အတူ ဖိလဈပိုငျမှာ fan meeting ပှဲလေးကငျြးပခဲ့ပါတယျ။
ဖိလဈပိုငျမှာလညျး Nam Joo Hyuk ရဲ့ ပရိသတျတှေ အပွညျ့ပါပဲ။အနုပညာရှငျကိုခဈြတာလညျးခဈြတာပေါ့။ဒါပမေဲ့ လေးစားမှု၊အားနာသမှုတော့ရှိရမယျမဟုတျလား။Fan meeting ပှဲမှာ မိနျးကလေးပရိသတျတဈခြို့ရဲ့လုပျရပျက ပှဲကိုအနညျးငယျရုပျဆိုးသှားစသေလိုဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။Nam Joo Hyuk နဲ့ဓာတျပုံတှဲရိုကျကွဖို့လုပျနရေငျး မငျးသားခမြာ သကျတောငျ့သကျသာတောငျမရှိရအောငျအတငျးကိုတိုးကပျပူးကပျပွီးရိုကျနကွေတာပါ။ဘယျလောကျတောငျတိုးလဲဆိုရငျ ဓာတျပုံလညျးရိုကျအပွီးရော မငျးသားရဲ့လကျမောငျးမှာ မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့လကျသညျးကုတျခွဈရာအစငျးရာတှတေောငျကနျြခဲ့ပါတယျတဲ့။ပုံထဲမှာတှရေ့တဲ့အတိုငျးပါပဲ။
အဲ့ဒီပုံတှကေိုမွငျပွီးတော့ ဖိလဈပိုငျက ပရိသတျတှကေရော၊ကိုရီးယားပရိသတျတှကေ အတျောလေးစိတျဆိုးခဲ့ကွပါတယျ။ကိုယျခဈြတဲ့အနုပညာရှငျနဲ့အနီးကပျတှရေ့လို့ ပြျောနတေဲ့ပရိသတျတှကေိုလညျးအပွဈမဆိုရကျစရာပါ။သူတို့လညျးမငျးသားကိုမွငျတော့စိတျမထိနျးနိုငျပဲ အတငျးဖကျမိကွတယျထငျပါရဲ့ ။သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူတဈခြို့က မနညျးကိုဖယျခဲ့ရပါတယျ။
အဲ့ဒီပှဲမှာ မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ ရဲတငျးလှနျးတဲ့အပွုအမူတှကွေောငျ့ Nam Joo Hyuk ရဲ့ ပုံစံက သိပျပွီးသကျတော့ငျသကျသာပေါ့ပေါ့ပါးပါးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပမေဲ့ ပွညျသူခဈြတဲ့အနုပညာရှငျပီသစှာပဲ သူအကောငျးဆုံးလုပျခဲ့တာပါ။မငျးသားရဲ့လကျမောငျးက အစငျးရာကုတျခွဈရာတှေ၊အတငျးဝိုငျးဖကျခံရတာတှကေိုမွငျပွီး ပရိသတျတှကေအနုပညာရှငျတှအေတှကျ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့လုံခွုံရေးတှရှေိသငျ့တယျ၊သူတို့အပျေါပိုပွီးလေးစားမှုရှိသငျ့တယျဆိုပွီးတှဈဈတာတှေ၊အငျစတာဂရမျတှကေနပွေောထားကွပါတယျ။
ဖိလဈပိုငျပရိသတျတဈခြို့က မငျးသား Nam Joo Hyuk ရဲ့ ခဈြသူဟောငျးဖွဈတဲ့ Lee Sung Kyung နဲ့ သဘောတူပုံပါ။သူတို့ရဲ့ဇာတျကားလေးကိုပွနျပွီးဖှငျ့ပွခိုငျးခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒါနဲ့ ပတျသကျပွီး FanMeeting ပှဲမတကျရောကျနိုငျခဲ့တဲ့ပရိသတျတှကေ ထိုပရိသတျတှကေို အပွဈတငျထားပါတယျ။”ဒီလိုမြိုးအရငျရညျးစားနဲ့ပတျသကျပွီးပွောရတာ၊သူတို့ရဲ့ရုပျရှငျကိုပွနျကွညျ့ရတဲ့ခံစားခကျြက ဘယျလိုလုပျကောငျးနိုငျမှာလဲ?သူ့အပျေါလေးစားမှုမရှိကွဘူး”ဆိုပွီးပွောထားပါတယျ။”အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့အတှကျ Weightlifting Fairy Kim Bok-joo ဇာတျကားလေးကိုပွနျကွညျ့ရတာကမငျးသားအတှကျ အရမျးစိတျညဈသှားမယျတော့မထငျရပါဘူး။သူတို့က ခဈြသူတှအေဖွဈကနပွေတျစဲခဲ့ပမေဲ့ အရငျကတညျးက သံယောဇဉျကွီးခဲ့ကွတဲ့သူငယျခငျြးတှပေဲလေ။Fan Meeting က နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ သညျးသညျးလှုပျအားပေးမှုကွောငျ့သာ သူ့အနနေဲ့စိတျမသကျမသာဖွဈခဲ့တာဖွဈမှာ”လို့တဈခြို့ပရိသတျတှကေတော့ ပွနျပွီးဖွရှေငျးထားကွပါတယျ။
နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့အားပေးကွမျးခကျြကလညျး ပရိသတျတှဝေဖေနျခငျြလညျးဝဖေနျခငျြစရာပါ။ဒါပမေဲ့ သူတို့အိုငျဒေါလျစိတျရှုပျသှားခဲ့လို့ ပရိသတျတှကေပွနျပွီးတောငျးပနျခဲ့ပါတယျတဲ့။ပုံလေးတှကွေညျ့လို့ရအောငျ ပွနျပွီးမြှဝလေိုကျတယျနျော။
ချစ်တဲ့သူကို လက်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါ ….